Umthengisi we-YALIS-kwisiXeko saseZhongshan IsiXeko seYALIS seMveliso yeHardware, Ltd.
Urhwebo lweCeleste yiarhente emele iYALIS kwimakethi yaseUkraine. Bajongane nabathengisi behardware basekhaya, iivelile kunye nabavelisi beminyango. Ukususela ngo-2017 ukuya ku-2019, kunye nentsebenziswano yoshishino engenakwahlulwa, saqala ukumilisela ukukhuthazwa brand yethu Ukraine.
I-Anyhotel Vietnam Joint Stock Inkampani yenye yearhente emele iYALIS kwimakethi yaseVietnam. Baneenkampani zeminyango engaphantsi kwegama elisibhozo eVietnam, abajongane nabaphuhlisi bezindlu zokwakha. Saqala ukusebenzisana ukusukela ngo-2014. Okwangoku, i-YALIS yakhe umfanekiso othembekileyo nowamkelekileyo okhuphisanayo noHafele, Yale, kunye no-Imuntex.
I-BHM yiarhente yethu kwimakethi yaseSingapore. Banobungangamsha obuphezulu obunika izixhobo zokwakha izixhobo zokwakha izindlu. U-YALIS uqala ukukhuthaza uphawu lwethu eSingapore kwi-2019.
Intengiso yaseMzantsi Korea
Umhambisi waseMzantsi Korea weYALIS Brand, uJoil ART wayengumhambisi eMzantsi Korea weempawu ezithile zaseYurophu. Ukuqala kwentsebenziswano kunye nophawu lwe-YALIS kwi-2019 kwaye baya kuthatha inxaxheba kwi-2020 KOREABUILD ngoJulayi phantsi kwegama le-YALIS.
Intengiso yaseSaudi Arabia
Ifumaneka eTaif, isixeko esisentshona kufutshane neJeddah. Umnyango ujolise kwizixhobo zokwakha ezinjengezibambo zeminyango, iitshixo ezikrelekrele, izinto zasemnyango, izibambo zekhabinethi eSaudi Arabia. U-YALIS usebenze ngokusesikweni no-Co Door ukusukela ngo-2019.
I-UAB Romida ijolise kwizitshixo, izibambo, iihenjisi kunye nolunye ucango lwezixhobo zehardware kunye nevenkile yokuthengisa ngaphezulu kweminyaka engama-20, hayi eLithuania kuphela, kodwa nakwamanye amazwe. Rhoqo ukwandisa uluhlu olubanzi lweemveliso. U-YALIS no-ROMIDA baqala ukusebenzisana ngo-2019, kwaye i-ROMIDA yaba ngumhambisi wegama le-YALIS eLithuania.